Ebe kacha mma chọta iTunes nkiri amụọ na-ebiri na-na iTunes Store nke iTunes ngwa na kọmputa gị. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ngwa arụnyere, ị ga-mkpa gaa iTunes ibe weebụ na ibudata ya. Anya isi na ị na-ama nwere ngwa arụnyere na na na maara otú na-emeghe, na-eso nzọụkwụ n'okpuru ka ịnweta Movies ngalaba na iTunes ụlọ ahịa.
Part 1: Olee ka ịnweta Movies ngalaba na iTunes ụlọ ahịa
Nkebi nke 2: Olee otú ịchọta free iTunes fim
Nkebi nke 3: Ego ole bụ Movies on iTunes
Nkebi nke 4: Olee otú iji nweta iTunes nkiri Koodu
Part 5: Olee otú iji gbazite iTunes nkiri
Nzọụkwụ 1 - Open iTunes wee họrọ iTunes Store.
Nzọụkwụ 2 - Na iTunes ụlọ ahịa, họrọ Movies iji weghachite a dum nhọrọ nke na fim. Ị ga-enwe na-agagharị dị iche iche edemede na Genres.
Nzọụkwụ 3 - Ugbu a, jiri Movies ma ọ bụ Categories wedaa menu warara gị search dabeere genre.
Iji chọta free fim na Movies ngalaba nke iTunes bụ ihe ịma aka, ma e nwere free ngwa na ị nwere ike ibudata na-ekiri free nkiri na gị iPhone ma ọ bụ iPad, ma ị ga-mkpa ka o duzie search iji chọta ezi onye ahụ. Na-eso ntụziaka n'okpuru ịchọta free ngwa ọdịnala na-ekiri fim maka free.
Nzọụkwụ 1 - Na iTunes search igbe, ụdị "free fim" na ibà. Ga-arụpụta ga-egosi a ndepụta nke free nkiri ngwa na ị nwere ike ibudata gị iPad ma ọ bụ iPhone.
Cheta na: Crackle ka ihe atụ, na-enye ohere ị na-ekiri fim na mkpanaka gị na ngwaọrụ ma ọ bụ na gị na telivishọn ma ọ bụrụ na ị nwere Apple TV. Crackle ka ihe atụ, na-enye ohere ị na-ekiri fim na mkpanaka gị na ngwaọrụ ma ọ bụ na gị na telivishọn ma ọ bụrụ na ị nwere Apple TV.
Nzọụkwụ 2 - Pịa na ngwa na ị ga-achọ ibudata na nyochaa njirimara gị iTunes akaụntụ site na itinye gị Apple ID na paswọọdụ. Mgbe nkwenye usoro zuru ezu, ngwa na ebudatara.
Na mgbakwunye na nbudata ngwa ọdịnala na-ekiri free fim, ị nwekwara ike na-ekiri free TV na-egosi na iTunes site na-ahọpụta egosi na TV, na mgbe ahụ Free TV ngosipụta na-egosi na TV Quick Links ngalaba.
E nwere ihe dị iche iche na-ekpebi ego nke a nkiri na iTunes. The price na a dabeere na ma na fim bụ ndị ọhụrụ, tupu iwu, blockbusters, Oscar mmeri, ma ọ bụ bundled. New na tupu iji fim ihe atụ a na-eri ihe karịrị okenye fim, mgbe blockbusters na Oscar mmeri n'agbanyeghị afọ, dịgasị na price. The price maka bundled fim bụ ihe n'ihi na otutu fim na-jikọtara na a ngwugwu ndibiat.
Ebe a bụ ndakpọ nke price nso maka nkiri na iTunes.
Okenye fim na-eri n'ebe ọ bụla si $3.99 ka $9.99.
Nga nyere iwu na ọhụrụ releases mbio $12.99 ka $ 19.99.
Blockbusters na Oscar mmeri mbio $12.99 ka $ 19.99.
Bundled fim na-amalite site mkpokọta $ 19.99.
All ahịa na njedebe nke ụbọchị dabeere na notoriety, ewu ewu, na kwuo na ndị a na fim natara. E nweghị set price maka a nkiri. E nwere ihe dị iche iche na-ekpebi otú ihe a nkiri ga na-eri.
Iji chọpụta otú ihe a nkiri na-eri, dị họrọ a nkiri na Movies ngalaba. Ị ga-eduzi ndị nkiri page. The price nke nkiri gosiri n'okpuru nkiri oyiyi.
Ị nwere ike ịchọta iTunes fim ma ọ bụ mgbapụta Koodu si DVD na iTunes dijitalụ mbipụta. Ị nwere ike ịzụta ha na kasị online na offline mkpọsa na-echekwa. Ọ bụrụ na ị nwere DVD / Blu ray diski na iTunes dijitalụ oyiri na ga-amasị agbara ya, na-eso ntụziaka n'okpuru.
Nzọụkwụ 1 - Open iTunes wee pịa on iTunes Store.
Nzọụkwụ 2 - Na Quick Links ngalaba na Home peeji, pịa Napụta.
Nzọụkwụ 3 - Na Sign na igbe, tinye Apple ID ma Paswọdu wee pịa Banye.
Nzọụkwụ 4- Tinye 12-ọbula koodu na-emi odude ke wet na-abịa na DVD ma ọ bụ Blu ray diski.
Nzọụkwụ 5 - Mgbe ị na-eme, pịa Tinye / Return isi. A igbe ga-emeghe nke ga-ekwe gị download nkiri.
iTunes-ekwe ka ị ịgbazite fim si Movies ngalaba na iTunes ụlọ ahịa. Ị nwere ike ịgbazite fim onwe ha na isi Hollywood nka. E nwere dum nhọrọ si dị iche iche edemede na i nwere ike na-agagharị site na kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaaka.
Iji mụtakwuo banyere renting nkiri na iTunes, họrọ Ịkwụ ụgwọ ụlọ & Ịzụ Movies na Movies Quick Links ngalaba. Nke a na peeji enye ihe ọmụma na niile uru maka ịgbaziri na ịzụ ihe nkiri na iTunes.
Ọ bụrụ na ị ga-achọ iji gbazite iTunes nkiri, pịa na nkiri na ị ga-achọ ịgbazite na Movies ngalaba na iTunes ụlọ ahịa. On nkiri peeji, họrọ mgbazinye price na ibà gị Apple ID na paswọọdụ iji gosi na mgbazinye.
E nwere ọtụtụ ihe nkiri amụọ na-ebiri dị na iTunes, ma ị ga-enwe ịchọ site na Genres na edemede na Movies ngalaba. I kwesịkwara agagharị nkiri bundles na-ele anya maka mmachi ire ere rịọ. Na oge apple awade amụọ na tupu nyere iwu, ọhụrụ releases, na bundled fim.
I nwekwara ike ịhụ iTunes nkiri amụọ n'ọnụ ego dị na ndị ọzọ na weebụsaịtị.
Olee otú iji tọghata WMA ka iTunes Iji maka Mac (Yosemite gụnyere)
Olee otú iji tọghata FLAC ka iTunes on Mac (Yosemite gụnyere)
Video Editor Maka Mavericks: Olee dezie Videos na OS X Mavericks
Olee otú iji tọghata Video ka Kindle Fire
Olee otú Mepụta a Funny Baby Video ngosi mmịfe
> Resource> Video> Olee Chọta Best iTunes Movie amụọ na Rentals